Kismaayo News » Maraykanka oo go’aan ka gaaray xuduudaha badda Soomaaliya
Maraykanka oo go’aan ka gaaray xuduudaha badda Soomaaliya
Kn: Wax noqonaya qarow dublamaasiyadeed oo soo wajaha dowladda cusub ee Soomaaliya ayaa maxkamad ku taala Maraykanka waxa ay xukuntey in xuduuda badda ee Soomaaliya ay dhantahay 12 mile oo kaliya.
Dacwada waxa ay quseysay dad Soomaali ah oo loo heysto fal dambiyeedyo burcad badeednimo oo ka dhacay meel 40 mile u jirta xeebta Soomaaliya, sidaasi darteedna maxkamada ay banaysatay in Maraykanka uu xaq u leeyahay in gudaha dalkaasi lagu qaado dacwada eedeysanayaasha.
Garyaqaanada u doodaya eedeysanayaasha ayaa sheegey in dhul-badeedka Soomaaliya uu dhanyahay 200 mile, sidaasi darteed uu dambiga ka dhacay dhulka Soomaaliya, Maraykankuna uusan xaq u lahayn in uu go’aan ka gaaro dacwada loo heysto dadka Soomaalida ah.
Balse maxkamadda ayaa xukuntey in dhul badeedka Soomaaliya uu yahay 12 mile oo kaliya, maadaamaa ay saxiixday heshiis sidaasi dhigaya oo caalami ah, dambiguna ka dhacay 40 mile meel u jirta, sidaasi darteedna maraykanku xaq u leeyahay in uu dhagaysto dacwada, xukumana.
Lama oga jawaabta ay Soomaaliya ka bixin doonto arrintani, laakiin waxay wax ka ifineysaa heshiisyada caalamiga ah ee ay dowladdu saxiixdo ee aanan laga fiirsanin.